यस वर्ष जन्मदिन नमनाउने भइन् ऐश्वर्या रायले, कति वर्ष पुगिन्?
मुम्बई – हम दिल दे चुके सनम, देवदास, गुरु जस्ता सुपरहिट चलचित्र दिएकी भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको आज ४४ औं जन्मदिन हो । ४४ वर्षकी यी नायिका बलिउडकी सुन्दरीका रुपमा चिनिन्छिन् । उनको रुपलाई लिएर अहिले पनि उनका फ्यान कायल हुन्छन् । ऐश्वर्या रायसँग बलिउडका नयाँ कलाकार काम गर्नका लागि पनि उत्तिकै रुचि राख्छन् ।
आज ऐश्वर्याको जन्मदिनमा बलिउडका हस्तीले उनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जन्मदिनको शुभकामना दिइरहेकी छन् । उनले कैयन् वर्षदेखि मिडियासँग आफ्नो जन्मदिन मनाउने गरेकी छिन् । तर यसपटक भने उनले जन्मदिन नमनाउने भएकी हुन् ।
खासमा ऐश्वर्या रायका बुबाको यस वर्ष निधन भएको थियो । त्यही कारणले उनले आफ्नो जन्मदिन नमनाउने भएकी हुन् । यस वर्ष अभिनेता अमिताभ बच्चनले पनि आफ्नो जन्मदिन मनाएका थिएनन् ।
स्याम्पुका कारण अनुष्का र विराटको परेको थियो लभ ! फेरि आए चर्चामा